दसैमा टिकाको रंगबाट एलर्जी भएमा के गर्ने ?
हिन्दुहरूको महान चाड बडा दसैको दिनमा दुर्गा भवानी पूजाको विसर्जन गरि आफ्ना ठुलाबडाहरूको हातबाट प्रसाद स्वरुप टिका जमरा लगिने चलन पहिले देखि नै चलि आएको छ । पहिला टिका बनाउनका लागि प्रयोग गरिने अबिर प्राकृतिक हुने हुदा खासै टिकाका कारण एलर्जी हुदैन थियो । तर, आजकल अबिरको सट्टामा अबिर जस्तै देखिने रंगको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ । कैयौ पटक धुदा पनि हात तथा निधारबाट यस्ता रंग छिट्टै छुट्ने गर्दैन ।यस्ता उपयोग गरिने रंगमा भएको रसायन छालाको लागि खतरनाक हुन सक्छ ।
टिका लगाउने बेलामा धेरैजसो व्यक्तिलाई प्रायः छाला पोल्ने, रंग परिवर्तन हुने र छाला सुक्खा हुने जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छ । यति मात्र नभएर रंगमा भएको रसायनका कारण छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने, सुन्ने क्षमता गुमाउने, तथा दम जस्ता समस्या समेत देखिने हुन सक्छ । धुलिखेल अस्पतालका छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णका अनुसार रंगमा थुप्रै प्रकारका रसायनहरूले छालाको भित्री सतहलाई नोक्सान हुने हुदा रंगले छालालाई सुक्खा बनाउने गर्छ ।
रंगमा भएको रसायनले छाला पोल्ने, एलर्जी हुने, डाबर वा बिमिरा निस्कने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ । टिका बनाउन प्रयोग गरिने सुक्खा अबिरमा एसवेस्टस र अभ्रख मिसाइन्छ । यसले दम, छाला र आँखामा जलन र संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ । बजारमा पाइने रंगमा माटो, चुन, सिसा, मर्करी जस्ता हानिकारक तत्त्व मिसाइएको हुने हुदा टिका लगाउन अघि अनुहारमा कुनै तेल वा मोइस्चराइजर लगाएमा रंग छालाभित्र जान पाउँदैन ।डा. कर्णका अनुसार, रंगमा भएका रसायन र एलर्जी उत्पन्न गर्ने तत्त्वहरू सासको माध्यमले फोक्सोमा पुग्न सक्ने हुदा दमको आक्रमण बढ्न सक्छ ।
बिराटनगर स्तिथ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ्ग एकेडेमीकी ब्युटीसियन सिता घिमिरेले दशैंमा टिका लगाउनु अघि एलर्जीबाट बच्नका लागि टोनर, मोइस्चराइजर र फाउन्डेसन लगाउन सकिन्छ । यसले टिकाको रंगलाई छाला भित्र पस्न दिदैन । रंगले एलर्जी गरीहालेमा छाला पोलाइ कम गर्नका लागि टिका मेटेर अनुहार राम्ररी सफा गरेपछि मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले छालाको सुक्खापनमा कमी ल्याएर पोलाईलाई कम गर्छ । टिकाको रंग नगएको खण्डमा मेट्नका लागि छालालाई बेस्सरी माडेर बारम्बार साबुनले धुनु हुदैन, यसले छालालाई अझै सुक्खा बनाउने गर्छ ।
सम्भव भएसम्म फेसवास अर्थात् नरम साबुन उपयोग गर्नुपर्छ । अबिरमा सिलिका हुनाले छालालाई नोक्सान पुर्याउने गर्दा टिकाको लागि प्रयोग गरिने अबिर पाउडर जस्तै हुनुपर्छ, दाना भएको रुखो हुनु हुँदैन । यसपाली दशैंमा टिकाको कारण छालामा हुने एलर्जीबाट बच्नका लागि टिकाको लागि प्रयोग गरिने अबिर प्राकृतिक र राम्रो गुणस्तरयुक्त छान्नु पर्छ ।